Brezila: Fampahafantarana ny Habaka, Ny “Batisa Nomerika” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2017 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Italiano, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 8 Martsa 2009 no nivoaka ny lahatsoratra teny anglisy)
Nitondra ny fampidirana nomerika ho ao Belo Horizonte, renivohitry ny fanjakana Breziliana Minas Gerais ny “Batisa Nomerika”. Nokarakarain'ny fiaraha-miasa teo amin'ny Governemanta tao an-toerana, sy ny Minisiteran'ny Mponina ary Ny Fikambanana Lan House ny hetsika tamin'ny Asabotsy io, izay mikatsaka ny fampiroboroboana ny fampidirana nomerika sy ny fandraharahana an-tserasera. Io no Fanasana Nomerika voalohany nitranga tao Belo Horizonte, na dia efa nitranga tsindraindray tany São Paulo sy Rio de Janeiro aza ny hetsika hatramin'ny taona 2005.
Solosaina miisa 50 mifandray amin'ny habaka no tao ambanin'ny tranolay lehibe tao amin'ny iray amin'ireo faritra an-drenivohitra ary nisy ny mpanentana miisa 100 izay nanampy ny olona amin'ny sokajin-taona sy fiaviana samihafa momba ny ambaratongan'ny aterineto nandritra ny tontolo andro. Nisy ny karazana atrikasa roa lehibe: ny Batisa Nomerika 1.0, ho an'ireo izay mbola tsy nampiasa ny solosaina mihitsy mba hianarana ny fototra sy ny fanaovana aterineto voalohany indrindra, ary ny Batisa Nomerika 2.0, ho an'ireo mpisera efa mahay kokoa ary mbola maniry ny handalina kokoa ny habaka malalak'izao tontolo izao sy hanao fanadihadiana mikasika ny fitaovana vaovao. Nitatitra tao amin'ny Twitter i Fábio Santos:
Nitondra ny zanany lahy 9 sy 12 taona tao amin'ny Batisa Nomerika androany i Haroldo, 44 taona. Miahiahy momba ny fiarovana ny zanany amin'ny aterineto izy.
Milaza amintsika ny tantaran'ilay ramatoa 67 taona ihany koa ilay mpisera Twitter @fabiosa, izay tsy mbola nampiasa solosaina mihitsy teo aloha ary nanapa-kevitra ny hanatrika ny Batisa Nomerika mba hahafahany mianatra fomba vaovao hiseraserana miaraka amin'ny rahavaviny izay efa manana fifandraisana ary mipetraka any amin'ny fanjakana iray hafa:
Tsy afaka miresaka amin'ny rahavaviny an-telefaonina mipetraka any Rio i MS Ignês ($) . ” Afaka miresaka aho ankehitriny “. Vita batisa izy.
Mampitaha ny mpisera vita “batisa” vaovao amin'ny sokajin-taona ity lahatsoratra avy ao amin'ny bilaogin'ny hetsika ity. Avy amin'ilay mpisera Flickr pvilla ny sary voalohany :
Eto avokoa ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra !
Mampahafantatra ireo mpisera Twitter vaovao avy ao Belo Horizonte ity iray ity:
Noho ny fanampian'ny mpanentana Rosalves, mianatra ny fomba fampiasana ny Twitter ireo mpanentana vaovao!
Ity ambany ity ny lahatsarin'ny hetsika izay nalefan'ny equipeteiamg. Azo jerena amin'ny alalan'ny rakitry ny hetsika ny lahatsary sasany .
Nanaoana mivantana tao anatin'ny bilaogy ny hetsika ary nalefa mivantana tamin'ny alalan'ny tranonkala izay nanangona ny fanehoan-kevitra rehetra tao amin'ny Twitter, Flickr, YouTube sy ireo bilaogy, ankoatra ireo hafa, miaraka amin'ny tenirohy #bdigitalmg.